बाईसौँ पटकमा सरकारी जागिरे भएका गिरीधरको कथा - Everest Talk
बाईसौँ पटकमा सरकारी जागिरे भएका गिरीधरको कथा1 min read
मनभित्र सफलताको आगो छ भने लक्ष्य प्राप्तिका लागि कसैले पनि रोक्न सक्दैन ।
२०७६, १९ पुष शनिबार १४:४४
– निरज दाहाल
मान्छेको जीवनमा समस्याको आगो कहिलेसम्म बल्न सक्छ ? पक्कै पनि जबसम्म यो धरतीमा मानव छन, तबसम्म यो धरतीमा समस्या छ । बस्, समस्याको डोरी कसले कतिपटक समाउँछ भन्ने कुरामा भर पर्नसक्छ ।
आज हामी त्यस्तो सरकारी अफिसरको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ, जसले जीवनमा आत्महत्या नै समस्याको समाधान हो भन्ने बुझे । कयौँ असफलताले छोपेको आफ्नो जीवनमा सूर्यको पहिलो किरण लिएर आए ।
पानी परेको बेला
वेगले उडोस् कुनै पंछी
खुल्ला आकाशमा त
जो पनि सफर गर्छ
गिरीधरले बाल्यकालमा एक सपना देखेका थिए । जुनै हालतमा उनलाई एक सरकारी जागिरे बन्न्ुा थियो । भारत र पाकिस्तानको सिमानामा रहेको राजस्थानको उडखा गाउँमा जन्मेका गिरीधर सिंह खान्दा अफिसर छन् ।
उनी आफ्ना विगतका दिन सम्झँदै बताउँछन् कि उनको बुवा मदिराको लतमा फसेका थिए । उनका दुई भाइ अपाङ्ग थिए । उनको पारिवारिक स्थिति सोचेभन्दा तल्लो स्तरको थियो ।
हुनेखाने र हुँदा खाने, संसारमा दुइ वर्ग छन् । उनी हुँदा खाने वर्गमा पर्ने गर्थे ।
उनी आफ्ना विगतका दिन सम्झँदै भन्छन्– मेरो घरमा यस्तो अवस्था थियो कि हामी रातो खोर्सानीलाई कुटेर, नुन र पान मिसाएर रोटी चोब्दै खाने गथ्र्यौँ ।”
अध्यनन र आवश्यकतालाई तुलोमा राख्दा आवश्यकताकै पल्ला भारी हुन जान्छ । गिरीधरलाई त अध्ययन र आवश्यकता दुवै आफैँले मेलोमेसो मिलाउनु थियो । यो अवस्था पनि उनले संघर्षकै घेरामा रहेर बिताए ।
छिमेकी बच्चाहरूको पुरानो कपडा लगाएर उनी स्कुल जान्थे भने अम्बुजा सिमेन्टको बोरा हातले सिलाएर स्कुलको झोला बनाउने गर्थे ।
त्यो पचास डिग्रीको घाममा उनी खाली खुट्टा नै स्कुल जाने गर्थे । जब उनी कक्षा नौमा पुगे, तब उनले घरको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्कुलबाट फर्केपछि आइसक्रीम बेच्न वा सब्जीको ठेला लगाउन जान थाले ।
जीवन यही क्रममा नै चलिरहेको थियो । उनको जीवनमा अर्को ब्रजपात पर्यो, हजुरआमा र दुइ काकाले आत्महत्याको बाटो रोजे । उक्त घट्ना सेलाउन नपाउँदै उनका एक दाजुले पनि आत्महत्याको बाटो समाए । यो अवस्थापछि गिरीधरको घरमा कयौँ महिना निरासाको बादल घरको छानोमाथि आएर बसिरह्यो । उनको परिवारले अब के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने कुरा नै बिर्सिए ।
यही समयमा उनका बुवाले उनलाई बारबार भन्ने गर्थे– छोरा घरको यो अवस्था छ । तँ पढाइ छाडिदे ।
तर गिरीधरको मनले भन्थ्यो– पढ्.. पढ्… पढ्…., र सरकारी जागिर खा ।
उनले पढाइ छाडेनन् । यही कारणले उनी घरमा गाली खाइरहन्थे । र, परिवारको गालीमा मलम लगाउन गर्मी बिदामा सहर गएर समान बेच्थे ।
आफूले कुनै परीक्षा पनि पहिलो पटकमा पास गरेको गिरीधरलाई याद छैन । निरन्तरको असफलताले उनले जिन्दगीसँग हारे खाएँ । उनलाई सबैबाट मुक्तिका लागि आत्महत्या नै उचित उपाय हो जस्तो लाग्थ्यो । मर्न कन लाग्थ्यो । तर आमाबाको अनुहार, आङको च्यातिएको कपडा सम्झिएर समालिन्थे । आफैँलाई सम्झाउँथे– तँ संसार जित्न जन्मेको होस् । तँलाई आत्महत्याको कुनै अधिकार छैन ।
उनले दृढता कसे– यी रित्ता भाँडोलाई अन्नले भर्नेछु, यो झुपडीलाई महल बनाउँछु र आफ्ना आमाबुवाको अनुहारबाट दुःख सँधैलाई हटाइदिनेछु । बस,् सरकारी जागिर त खान पाऊँ, आज नभए भोलि बदल्न त अवश्य नै बदल्छु ।
यो उनको दृढता थियो ।
उनी भन्छन्– तर सोच्दैमा सबै कहाँ पुग्छ र ?
उनको लगातार असफलताको नतिजाले उनलाई लाग्यो– मेरो जिन्दगी कपडाको कारखानामा वा कसैको खाना पकाउनको लागि मात्र रहेछ । र, पढाइसँगै उनको काम सुरु गरे ।
उनले आफ्नो ग्र्याजुएसनको समयमा दश जानलाई खाना बनाएर खुवाउने गर्दथे । दिनको समयमा कलेज र रातको समयमा उनी अखबार कारखानामा काम गर्ने गर्थे ।
सरकारी कोटाको विभिन्न तह गरेर उनले २१ वटा परीक्षामा फेल भए । परीक्षामा उनी कहिले एक वा दुइ नम्बरबाट पछाडि रहन्थे, कहिले फिजिकल टेस्टमा फेल हुन्थे त कहिले कम्प्यूटरमा । उनको जिन्दगीमा पुनः निरासा छायो । अब उनी पक्का भए कि मेरो बाँच्नुको कुनै औचित्य छैन । उनलाई लाग्थ्यो– असफल मेरो लागि सदैव छ । म हिल्यै सफल हुन सक्दिनँ ।
यसै क्रममा परिवार, छिमेकी र आफन्तले पनि भन्न सुरु गरे कि तेरो भाग्य नै यस्तो छ । पढ्न छाड् र काम गर । परिवारको स्थितिमा सुधार आउन सक्छ । तर पनि गिरीधरले हार मानेनन् ।
उनको मनले यही भन्थ्यो कि जब चिया बेच्ने मोदी प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् भने, बाल्यकालमै आमाबुवाको हत्या भएका मिल्का सिंह देशको लागि गोल्ड मेडल ल्याउन सक्छन् भने, म सरकारी जागिरे बन्न किन सक्दिनँ ? म सक्छु । म गर्छु । यही उनको दृढ इच्छा थियो ।
एकदिन आयोगले गाउँ विकाशमा फारम खुलायो । उनले बाईसौँ पटक किताब समाए र परीक्षा दिए । पुरानै काम निरन्तर थियो । केही महिनामा नतिजा आयो । यो पटक जहिल्यै हार्ने गिरीधरले हारलाई नै हराइदिए । र, जिन्दगीलाई जिते ।
उनी भन्छन्– यो मलाई चुनौती थियो कि जसले घरमा चार आत्महत्या देखेको थियो, जो २१ पटक फेल भएको थियो, जो खाली खुट्टा स्कुल जान्थ्यो र बरफ बेच्थ्यो, त्यसले आफ्नो लक्ष्यलाई समाएर देखाउनु ।
तर अब मलाई थाहा छ, मनभित्र सफलताको आगो छ भने लक्ष्य प्राप्तिका लागि कसैले पनि रोक्न सक्दैन ।
स्रोत : जोस टक
Tags: गिरीधरसरकारी जागिरे